Isamisiwe eyokushayela iSilo indishi - Ilanga News
Home Izindaba Isamisiwe eyokushayela iSilo indishi
ISilo uMisuzulu kaZwelithini kuthiwa siyazondla emuva kokuba uhulumeni uyekile ukufaka imali eNdlunkulu
IPHUNZILE imizamo ye-Ndlunkulu kaZulu yokuvula i-akhawunti “obekuzokushaywa kuyo indishi” yokondla iSilo uMisuzulu kaZwelithini kaBhekuzulu, okumanje kuthiwa siyazondla emuva kokuba uhulumeni uyekile ukufaka imali endlunkulu njengoba kusaqhubeka umbango ngesihlalo sobukhosi.
Ukushayelwa kweSilo indishi, kule akhawunti ebizwa ngeKing’s Fund Account kwavela emhlanganweni wabantwana basendlunkulu owawusesishayamthetho esidala oNdini mhla ka-29 kuMandulo (September), owawuhanjelwe yiSilo Misuzulu noNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi.
Okhulumela iNdlunkulu kaZulu, uMntwana Thulani Zulu, uthe indaba yale akhawunti babuye babona ukuthi mabayimise njengoba zibeningi izinto obekufanele bezenze uma beqhubeka nayo.
Bekufanele babhalise kwaSars nakwi-financial service board ukuze i-akhawunti ingagcini seyivalwa ngo-ba kuthiwa kayiyilandeli imithetho kahulumeni yokuqoqwa kwemali. UMntwana Thulani uthi banqume ukuba kusetshenziswe i-akhawunti yesikhwama seSilo uZwelithini eyayenzelwe ukuba kuqoqwe o-R5 esizweni ukuze kuliwe udaba lo-mhlaba.
“Sitholile ukuthi kunemali eya-yifakwe kule akhawunti yesikhwama seSilo esingasekho. Injalo nje le akhawunti ivaliwe njengoba kusenezinkinga zesihlalo sobukhosi.
“Sibone kungcono silinde zixazululeke besesisebenzisa sona, si-shintshe kungabe kusaba yiKing’s Fund Account, kodwa kube ngesesizwe. Sifisa sibe sikhulu, sisebe-nzise sona ukwenza izinto zesizwe, kubalwa nemikhosi,” kusho
Uthe bazoqhubeka nokuhlanganisela iSilo njengoba benza, ukuze siphile kuze kufike isikhathi soku-thi kuxazululeke izinkinga endlunkulu.
UMnu Willies Mchunu ohola
ithimba elaqokwa nguNgqongqo-she wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu, uDkt Nkosazana Dlamini-Zuma ukuba lizame ukuxazulula izinkinga endlu-nkulu, utshele leli phepha-ndaba ukuthi sebehlangane kwaze kwaba kathathu nendlunkulu.
Uthe kule mihlangano be-bekhona abahambisana no-Mntwana Thembi, abafuna isihlalo sinikwe uMntwana uSimakade, kubekhona abaha-mbisana noNdunankulu kaZulu, abafuna sinikwe iSilo uMisuzulu.
“Kule mihlangano kuye kwacaca ukuthi ondlunkulu namanye ama-zinyane bebengafiki, sasesizama ukuthi sibasondeze, kwasekuphela isikhathi ebesibekelwe sona sokuthi sihlanganise umbiko. Sicele ku-ngqongqoshe ukuba aselulele isikhathi ngenyanga, nempela wavuma. Kumanje sizama ukuhlangani-sa umbiko kangqongqoshe, okunguye ozobe esebona ukuthi wenzani ngawo.
“Okumele kusicacele singabantu, wukuthi akithina esizoqhamuka nesixazululo kulolu daba, ko-dwa ngibona silele kubona abasendlunkulu ukuthi bamukelane. Siyamcela noNkulunkulu ukuba angene kubona, abenze babone ukuthi ukuphikisana ngeke kubayi-se ndawo, lowo ophakanyiswayo esekwe ukuze kuyiwe phambili,” kusho uMnu Mchunu.
Uthi lo mbiko kangqongqoshe kumele bawuhambise lingakapheli isonto besebezama ukuthi akukho yini okungenzeka ukuya phambili kulesi sikhathi esingeziwe.
Previous articleUsuthembele kuNkulunkulu umndeni kaMgilitsha
Next articleKumele kubhekwe kubatshalimali bakuleli